Madaxweynaha oo guul ku tilmaamay shirka IGAD – Radio Muqdisho
Madaxweynaha oo guul ku tilmaamay shirka IGAD
Muqdisho, 10 Jan 2015.Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa guul ku tilmaamey qabsoomidda shirka wasiirada arrimaha dibedda ee waddamada ururka IGAD oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
“Shirkan waxaa uu ahaa imtixaan dunida ay ku eegeyso kartideena, waxqabadkeena iyo inaan dib u soo ceshan karno kalsoonidii beesha caalamka ay nagu qabtey, Ilaahayna wuu nagu guuleeyey oo imtixaankii wan ku najaxney” ayuu yiri madaxweynaha oo xafiiskiisa kula hadlayey saxaafadda.
Madaxweynaha ayaa sheegey in ka guul gaarista qabsoomidda shirkan ay ka dhalatey iskaashiga dowladda iyo shacabka, taageerada dadka la’aanteedna aysan suuragal noqon lahayn in la qabto hawshan baaxadda weyn leh ee sharafta u soo hoysey dalka Somalia.
“Waxan aad ugu hambalyeynayaa shacabka, dulqaadka ay muujiyeen intii ay socdeen hawlaha shirka iyo qabanqaabada intaba. Intaa kadib in shacabka waxaa la gudboon inay muujiyaan kalsooni ah inay wax walba oo wanaagsan , horumarna u keeni kara waddanka ay qaban karaan, isla mar ahaantaana ay iska dhegatiraan dacaayadaha cadowga oo danta laga leeyahay ay tahay in shacabka lagu niyad jebiyo” ayuu raaciyey Madaxweynaha.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale shacabka xusuusiyey in xalka mashaakilaadka dalka ka jira uu ku jiro gacanta shacabka, isla markaana xal shisheeye aanu dawo noqon karin.
Isagoo ka hadlayey arrimaha siyaasadda ee dalka madaxweynaha waxaa uu xusey in si habsami ah ay u socdaan hawlaha dalka looga hirgelinayo nidaaamka federaalka, kaas oo sal u noqon doona mustaqbalka siyaasadda Soomaaliyada cusub ee dimoqraadiga ah.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii ugu baaqey shacabka in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan sidii looga gudbi lahaa caqabadaha jira, isagoo dhanka kalena saxaafadda ugu baaqey inay ka qeyb qaadato nabadeynta iyo dib u dhiska dalka.
Ugu dambeyntii, shirka wasiirada arrimaha dibedda ee IGAD oo maanta soo xirmey ayaa qodobada ugu muhiimsan ee ku xusnaa war murtiyeedka waxaa ka mid ah in shirka soo socda ee madaxda IGAD uu ka dhaco Muqdisho, lana sii wado taageerada loo fidinayo Soomaaliya.
Liverpool oo Ka Adkaatay Kooxda Sunderland “SAWIRRO”
Kooxda Chelsea oo Badisay iyo Manchester City oo Bareejo Lagu Celiyay “SAWIRRO”